अफगानी विमान ताजिकिस्तानले खसालिदियो, 'कति थिए विमानमा ?' - इ-दैनिकी
अन्तराष्ट्रिय, मुख्य समाचार
उज्बेकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेको एउटा अफगान सैन्य विमानलाई हवाई प्रतिरक्षा बलले खसालिदिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार उक्त विमानले गैरकानुनी रूपमा उक्त मध्यएशियाली राष्ट्रको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो।
उक्त विमानमा कति जना सवार थिए वा कोही जीवित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उनले खुलाएनन्। अफगानिस्तानको सीमामा रहेको दक्षिणी प्रान्त सुखन्दारियोका एक चिकित्सकले समाचारसंस्था एएफपीलाई अफगान सेनाको पोसाक लगाएका दुई बिरामी आइतवार साँझ भर्ना गरिएको बताएका छन्।
तीमध्ये एक जनासँग प्याराशुट रहेको र उनको हाड भाँच्चिएको जानकारी ती चिकित्सकले दिए। आइतवार उज्बेकिस्तानका निकायहरूले सीमा पार गरेका कारण ८४ अफगान सैन्य अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन्।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानले नियन्त्रणमा लिएसँगै त्यहाँ अस्थिरता बढेको बताइएको छ। अफगानिस्तानका मुख्य सहरहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबान लडाकुहरू आइतवार राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए।
यसैबीचअफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबानले लडाइँ सकिएको घोषणा गरेको छ। काबुलबाट कैयौँ अफगानहरू घर छाडेर भागिरहेको खबर आइरहेका बेला त्यहाँका राष्ट्रपति पनि आइतबार विदेश पलायन भएका छन्।
देश छाडेपछि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी कहाँ गए भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। त्यस्तै त्यहाँका उपराष्ट्रपति अमिरुल्लाह सालेहले पनि काबुल छाडेको बताइएको छ। सुरुमा राष्ट्रपति गनी भागेर ताजिकिस्तान गएको बताइएको थियो।
तर पछि अल्जाजिरा टेलिभिजनले उनी उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकन्द पुगेको समाचार प्रसारित भयाे । अल जजिराका अनुसार राष्ट्रपति गनी, उनकी पत्नी, सेना प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तासकन्द पुगेका हुन्।
अल जजिराले राष्ट्रपतिका निजी सुरक्षा गार्डलाई उद्धृत गर्दै यस्तो समाचार दिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। यसैबीच एउटा फेसबुक पोस्टमा अफगान नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै गनीले काबुल छाड्नु आफ्ना लागि एउटा कठिन फैसला भएको बताएका छन्।
उनले ‘रक्तपात रोक्नका लागि’ उक्त निर्णय लिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफू काबुलमा रहँदा रहँदै तालिबान काबुल आइपुग्दा झडप हुन्थ्यो र त्यसले लाखौँ मानिसको ज्यान खतरामा पर्न सक्थ्यो भनेका छन्।
गनीले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्,‘आज मैले एउटा कठिन निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तालिबान राष्ट्रपति भवनमा आउन चाहन्थे, उनीहरूसामू उभिऔँ वा आफ्नो प्यारो देश जसको सुरक्षार्थ विगतका २० वर्ष मैले आफ्नो जीवन समर्पण गरेँ त्यसलाई छौडौँ’?
‘त्यस क्रममा अनगिन्ती मानिसहरू मारिन्थे र हामीले काबुल सहरको विध्वंश देख्नुपर्थ्यो, त्यसबाट ६० लाख जनसङ्ख्या भएको सहरमा ठूलो मानवीय त्रासदी उत्पन्न हुन्थ्यो।’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै उनले अब अफगानहरूको इमान, सम्पत्ति तथा आत्मसम्मानको रक्षाको जिम्मा तालिबानको भएको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्,‘तर उनीहरूले मन जित्न सक्दैनन्। इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैलाई पनि शक्तिले मात्र यो हक प्राप्त भएको छैन र मिल्ने पनि छैन। अब उनीहरूले एउटा ऐतिहासिक परीक्षाको सामाना गर्नुपर्नेछ।’
देश संकटमा परेका बेला सुटुक्क कसैलाई नभनी गनी देश छाडेर भागेपछि उनको अफगान नागरिकले आलोचना गरिरहेका छन्। बीबीसी
बीस वर्षसम्म अमेरिकी सैनिकसँग हुर्किएका अफगान सुरक्षाकर्मी तालिबानसामू कसरी यति धेरै निरीह भए ?
न्युयोर्क टाइम्स समाचार पत्रका अनुसार सन् २००१ यता अमेरिकाले अफगान सुरक्षाकर्मीको तालिम, हतियार र अन्य सामग्रीमा ८३ अर्ब डलर खर्चेको थियो। अमेरिकीहरूलाई सधैँ अफगानिस्तानमा लड्न सकिन्न बरू यहाँकै सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाए काबुलमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनिरहन्छ भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनको मुख्य रणनीति नै अफगान सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाएर जतिसक्दो चाँडो आफूहरू फर्किने भन्ने थियो।
त्यसका लागि उनीहरूले अफगान सुरक्षाकर्मीलाई उच्चस्तरको तालिम दिएका थिए। अत्याधुनिक हतियार दिएका थिए। तालिबानसँग हुँदै नभएका सैनिक जहाज र हेलिकप्टर किनेर राखेका थिए। अमेरिकीहरूले २० वर्ष समय र अर्बौं डलर खर्चेर बनाएको अफगान सुरक्षा फौजलाई दुई महिना नपुग्दै तालिबानहरूले पाखा लगाइदिए।
आफूले बलियो बनाएको भन्ठानेका अफगान सुरक्षाकर्मी तालिबानसामू निरीह भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनको टिमका सदस्यहरू पनि चकित परेका छन्। ‘हामीले अफगान सुरक्षा फौज देशको रक्षा गर्न असक्षम भएको देख्यौं तर यो हामीले सोचेभन्दा निकै छिटो भयो,’ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सिएनएनसँग भनेका छन्।
युद्ध लड्न र जित्न तालिम र हतियारले मात्र सकिँदो रहेनछ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सैनिक फर्किने घोषणा गर्नुअघि नै तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण तीव्र पारेका थिए।?
सुरूमा उनीहरूले ग्रामीण इलाकामा रहेका सुरक्षा पोष्टहरूलाई निशाना बनाए। खाद्यान्न र गोलीगठ्ठाको नियमित आपूर्ति नहुने ठाउँमा बसेका प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मी चारैतिरबाट तालिबान लडाकुले घेरेपछि आत्तिनु स्वभाविक थियो। तालिबानहरूले उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गरे ज्यान बचाइदिने प्रस्ताव राखे।
ग्रामीण क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरू धमाधम तालिबान लडाकुलाई हतियार बुझाउँदै आत्मसमर्पण गर्दै ज्यान जोगाउन लागे। कतिपय ठाउँमा त तालिबानहरूले उनीहरूलाई घर फर्कन गाडी भाडासमेत दिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
यसरी गाउँका सुरक्षा पोष्ट कब्जा गरेका तालिबानहरूले दोस्रो निशाना जिल्लालाई बनाए। दुर्गमका जिल्लाहरू तालिबानले धमाधम कब्जा गर्न थाले। सबैतिरका सुरक्षाकर्मीको एउटै गुनासो हुन्थ्यो( काबुलबाट हवाई सहयोग छैन, खाद्यान्न र अन्य सामग्री पनि सकिएको छ।
तालिबानको आक्रमण तीव्र हुनुअघि नै अफगान सुरक्षा फौज समस्यामा जेलिइसकेका थिए। अफगान सैनिक र प्रहरीमा काबुलमा सत्ता चलाइरहेकाप्रति गहिरो बितृष्णा थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानबाट फर्किने घोषणा गरेसँगै तालिबानहरूले आक्रमणलाई तीव्र पारे तर अफगान सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रपति असरफ घानीका लागि आफ्नो ज्यान बाजी राख्नु जरूरी ठानेनन्।
सुरक्षा फौजभित्र व्यापक भ्रष्टाचार थियो। किताबमा झन्डै ३ लाख सुरक्षाकर्मी भएको रेकर्ड थियो तर मैदानमा त्यति संख्या कहिल्यै पुगेन। विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा सिपाहीदेखि उच्च सैनिक अधिकारीहरू निराशा र तिरष्कृत भएको भाव व्यक्त गरिरहेका थिए।
गत साता तालिबानहरूले आक्रमण गरेको दक्षिणी सहर कान्दहरको एउटा प्रहरी चौकीभित्र आलुमात्र भेटिएको थियो। हप्तौंदेखि उक्त चौकीमा दैनिक रासनको रूपमा आलुमात्र सप्लाई हुँदै आएको रहेछ। आलुमात्र खाएर बाँचेको ज्यानले तालिबानसँग कसरी लड्नु, किन लड्नु?
‘यी फ्रेन्च फ्राईले मात्र अग्रपंक्तिलाई जोगाइराख्न सक्दैनन्,’ आलुमात्र रासनको रूपमा आएपछि कान्दहरका एक प्रहरी अधिकारीले भनेका थिए। कान्दहरको अर्को सुरक्षा पोष्टमा रहेका प्रहरी अधिकारी अब्दुल हलिमले आफूहरू भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेको बताएका थिए।
उनको पोष्टमा ३० जनाको दरबन्दी थियो तर मान्छे १५ जनामात्रै थिए। उनीहरू पनि गाउँ तालिबानले कब्जा गरेकाले मात्रै चौकीमा बसेका थिए।?
‘यति थोरै हतियारले हामी कसरी तालिबानलाई हराउन सक्छौंरु उनीहरूसँग मेसिन गन छन् तर हामीसँग मेसिन गनमा लाग्ने गोली थोरै छन्,’ अब्दुलले भनेका थिए। गाउँ र जिल्लामा तालिबानलाई रोक्न नसकेपछि अफगान सुरक्षा फौजले ३४ वटा प्रान्तीय राजधानी जोगाउने रणनीति लिएका थिए।
जब तालिबानहरूले एकपछि अर्को सहर कब्जा गर्न थाले त्यो रणनीति पनि असफल भयो।? सन् २००१ यता झन्डै ६० हजार अफगान सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। यत्रो ठूलो क्षति हुनुका पछाडि तालिबानभन्दा पनि सरकारकै कमजोर रणनीति कारक रहेको धेरै सुरक्षाकर्मीलाई लाग्छ।
गत साता उत्तरी सहर कुन्दुजको विमानस्थलमा रहेको अफगान आर्मी कर्प्सको मुख्यालय नै तालिबानले कब्जामा लिए। त्यहाँ रहेका हेलिकप्टर र अमेरिकाले दिएका ड्रोनसँग फोटो खिचेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखे।
तालिबानले आफ्नो मुख्यालय कब्जा गर्दा त्यसका कमाण्डर ब्रिगेडर जनरल अब्बास तावाकोली अर्को प्रान्तमा थिए। उनलाई पनि तालिबानको शक्तिले होइन सरकारकै लाचारीले सैनिक मुख्यालय तालिबानको हात पुगेको लागेको छ।
‘जानेर वा नजानेर संसदका केही सदस्यहरू र राजनीतिज्ञले नै दुश्मनले लगाएको आगोमा पंखा हम्किए,’ जनरल तावाकोलीले भने,‘कुनै पनि क्षेत्र युद्ध भएर ढलेको छैन बरू मनोवैज्ञानिक लडाइँले ढलेको छ।’
जनरल तावाकोलीले भनेको त्यो मनोवैज्ञानिक लडाइँ विभिन्न तहमा जारी थियो। सैनिक जहाजका पाइलट भन्थे – तालिबानविरूद्ध लड्न जाँदा सरकारलाई जहाजमा बसेका सैनिकभन्दा पनि जहाजमा केही हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ।
सरकार नियन्त्रित सहरमा एलिट कमाण्डो फोर्सका सैनिकहरू हुन्थे। उनीहरू तालिबानले सहर कब्जामा लिएपछि अर्को सहरमा जान्थे। रातभरि नसुती नसुती उनीहरू बिना लक्ष्य हिँडिरहन्थे।
तालिबानविरूद्ध लड्न ठाउँ-ठाउँमा जातीय मिलिसियाहरू पनि बनाइएका थिए। तिनीहरूलाई स्थानीय वारलर्ड्सहरूले परिचालन गर्थे। पछिल्लो समय त्यस्ता वारलर्ड्सहरूले पनि तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गरे।
यसरी हरेक फ्रन्टमा सुरक्षाकर्मी निरीह बनेपछि २० वर्षपछि तालिबानहरू फेरि काबुल फर्किएका छन्। दुई दशकपछि तालिबान काबुल फर्किएसँगै अफगानिस्तानमा एक युगको अन्त्य भएको छ।
को हुन् तालिबान ? कसरी भयो उदय?
तालिबान समूहले अफगानिस्तान र पाकिस्तान जोडिएका पाश्तुन क्षेत्रहरूमा सत्तामा आएपछि शान्ति-सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने र शरिया कानुन लागु गर्ने वाचागर्यो । तालिबानले दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तानबाट छिट्टै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो।
सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमाथि कब्जा गरे। त्यसको ठिक एक वर्षपछि उनीहरूले राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रपति बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरे।
भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका कदम, कानुनविहीनताको अवस्था कम गर्ने र व्यवसाय फस्टाउनका निम्ति सडक निर्माण तथा आफूनियन्त्रित क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामले उनीहरूलाई लोकप्रियता बनायो।?
न्यूयोर्कस्थि विश्व व्यापार केन्द्रमाथि सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको हमलापछि विश्वको ध्यान अफगानिस्तान तालिबानतर्फ तानिएको थियो। त्यो हमलाका प्रमुख सन्दिग्ध ठानिएका ओसाम बिन लादेन र उनको सङ्गठन अल-कायदालाई संरक्षण गरेको तालिबानमाथि आरोप लाग्यो।
सन् २००१ को अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। अनि डिसेम्बर महिनाको पहिलो सातासम्ममा तालिबानहरू परास्त भए।
विश्वै ठूलामध्ये एउटा मानवखोजी अभियानबीच समूहका तत्कालीन नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार र ओसामा बिन लादेनसहित केही उच्च नेताहरू उम्किन सफल भएको बताइन्छ।?रउश्र?उश्रतालिबानका कैयौँ वरिष्ठ नेताले पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा आश्रय लिए जहाँबाट उनीहरूले सो समूहलाई मार्गनिर्देशित गरे। तर “क्वेटा शुरा” को अस्तित्वलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गर्यो।
लगभग सोही समयमा तालिबानले सन् २००१ को पराजयपछि पहिलो पटक एउटा प्रान्तीय राजधानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्यो। त्यो थियो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुन्दुज सहर।
फेब्रुअरी २०२० को अमेरिका-तालिबान शान्ति सम्झौतापश्चात्‌ तालिबान समूहले आक्रमणको रणनीति फेरेको देखिन्छ। उनीहरूले सहर तथा सैनिक संरचनाहरूमा जटिल आक्रमण गर्नुभन्दा लक्षित हमला गर्न थालेको देखिन्छ जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिना सरकारको कमजोर अवस्थालाई लिएर अफगान अधिकारीहरूको गम्भीर चिन्ताबीच अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अमेरिकी फौजको फिर्ती प्रक्रिया टुङ्ग्याउने घोषणा गत एप्रिलमा गरेका थिए। त्यो बेला विश्व व्यापार सङ्गठनमाथि ह’मला भएको दुई दशक पूरा हुनेछ।